Musangano weUNWTO wewaini yekushanyirwa unopemberera shanduko yekumaruwa nemabasa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Musangano weUNWTO wewaini yekushanyirwa unopemberera shanduko yekumaruwa nemabasa
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Chile Kupwanya Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau • Waya Nhau Services
Musangano wechi4 wepasi rose nezveWinishuwarenzi, inotungamirwa ne World Tourism Sangano (UNWTO) uye Hurumende yeChile, yapedzisa nekudana kwekushandisa kugona kwakasiyana kwechikamu ichi kumutsiridza uye kutsigira nharaunda dzekumaruwa.
Yakaitirwa muColchagua Valley, kumusha kune vamwe vevagadziri vewaini vakakurumbira veChile, chiitiko ichi chakaona vanopfuura mazana mana vatori vechikamu vanobva kunzvimbo dzinosanganisira Argentina, France, Italy, Portugal, South Africa, Spain neU.SA, vakauya pamwechete kuzoongorora mikana yakawanda iyo waini kushanya kunogona kuunza. Chiitiko ichi chakawedzera kusimbisa hukama pakati peUNWTO neChile, Nhengo yeNyika kubvira 400. Svondo rapfuura, United Nations inyanzvi yakaratidzawo nyaya yezvekushanya seyakakoshesa chirongwa chekusimudzira kuUN Climate Change Summit, COP1979 kuMadrid, inoitwa pasi peMutungamiri weChile.
Achigamuchira nhume, Secretary-General weUNWTO Zurab Pololikashvili akati: “Kushanya kwewaini kunounza mabasa nemikana yekuita mabhizimusi. Inobata nzvimbo dzese dzehupfumi hwedunhu kuburikidza nekubatana kwadzo kumabasa emaoko, gastronomy uye kurima. Pane mukana wayo mukuru wekugadzira mikana yekuvandudza munzvimbo dziri kure. ”
Panyaya iyi, Gurukota rezvehupfumi, budiriro pamwe nekushanya, Lucas Palacios, akati "kushanya kwewaini kuri kuramba kuchikura nekuda kwesimba reminda yemizambiringa yakapihwa mukana wekupfuurira mberi, ichiwedzera maonero avo kupfuura kugadzirwa nekutengeswa kwewaini. , asi zvakare nekuda kwekuti, seHurumende, takashandisa mutemo weveruzhinji unokurudzira kusimudzira kwekushanya kwakasimba, uko isu tine mukana wakakura. ”
Undersecretary of Tourism, Mónica Zalaquett, akati "uyu mukana wekuratidza ndima yedu. Nhasi kune zvinopfuura zana minda yemizambiringa yakavhurika kune waini kushanya uye ino kongiresi iri nezve izvo. Vari kuenda kuchinjisa ruzivo, kugovana zviitiko, kusimudzira nhaurirano uye kuendesa maturusi, kuti tikwanise kunatsiridza kupihwa kwekushanyirwa kwewaini ”.
Kunyanya, iyo yechina edition yeinonyanya kukosha chiitiko chegore mune enotourism, yakatarisana nekwanisi kugona kushandura nharaunda dzekumaruwa, kuvaka hupfumi uye kugadzira mabasa kunze kwemaguta makuru. Pamwe chete nezvirongwa zvekushanya semutyairi wekuvandudza hupfumi hwevanhu kumaruwa, musangano uyu waivewo nemusangano uye nhaurirano dzekuti nzvimbo dzingasiyana sei uye nekuzvishambadza pachavo kuti vasangane nezvinodiwa nevatengi. Panguva imwecheteyo, nyanzvi dzeUNWTO dzakatsanangurawo mabhenefiti angangoita ekugamuchira shanduko yedhijitari uye kuita bhizimusi mukushanya, kunyanya mumaruwa.
Iyo Alentejo dunhu muPortugal icha gashira iyo 2020 edition yeUNWTO Global Musangano weiyo Tourism Tourism. Gore rinouya zvakare richava gore reUNWTO re'Ukushanya uye Kuvandudzwa kweMaruwa ', iine zviitiko zvakati wandei zvakarongwa.